Microsoft Outlook: nzira nhatu dzakanakisa kumuteereri wemeyili | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | 18/10/2021 12:32 | Zvirongwa, Windows
Microsoft haina yepamutemo Outlook email mutengi yeGNU / Linux, kunyange iri hongu yeApple. Panguva iyi, kana iwe uchida kushandisa chimwe chinhu chakafanana, unofanirwa kugutsikana neProspect Mail, mutengi asiri weiyo email email.
Imwe sarudzo ndeye kushandisa iyo dzimwe nzira huru yevatengi veemail varipo natively yako distro, pamusoro pekuve yakavhurwa sosi uye yemahara, uye izvo zvinogona zvakare kugadzirirwa kushandisa Microsoft email maakaundi pasina dambudziko. Muchikamu chino iwe uchaziva matatu akanyanya kukurudzirwa:
Thunderbird: ndeimwe yeanonyanya kuzivikanwa uye anonyanya kushandiswa vatengi veLinux. Yakagadzirwa neMozilla, kunyange hazvo yaizoburitswa uye yava kuchengetedzwa nenharaunda. Iyi email mutengi yakasarudzika chaizvo, uye inoshanda zvakanyanya. Iyo inobvumidza kuve nehunyanzvi, hunoshanda, hwakanyanya hunogadziriswa, hunhu-hwakapfuma, uye yakapusa email maneja kune vese vatangi nevashandisi vemberi. Iyo ine rutsigiro rwehuwandu hwakawanda hweemail services ese akajairwa uye bhizinesi.
kushanduka- Uyu mumwe mutengi weemail akaisawo pakati pezvakanakisa uye zvinodikanwa nevazhinji vashandisi. Iyo maneja akagadzirwa pasi peiyo GNOME chirongwa uye mauri iwe yaunogona kuve neyakabatanidzwa package package, pamwe neayo ajenda, karenda, nezvimwe, zvese mune imwechete software. Iyo yakanaka nzira yekugadzirisa mapoka ebasa, gara uchichengeta ako mabasa mundangariro, uye kutaurirana nemumwe waunoda. Zvakare, inotsigira Exchange Server.
Kontact: basa iri rinouya kubva ku KDE chirongwa. Iyo ine simba rakanyanya uye inokwanisika maneja, ine email mutengi, kalendari, kutaurirana uye mamwe mabasa. Yakanyanya-yakapfuma yeemail uye nerutsigiro rwema protocols mazhinji. Yayo interface inowanikwawo yakachena uye yakapusa. Nenzira, zvese Evolution uye Kontact inogona kuiswa munzvimbo dzese dze desktop ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Windows » Microsoft Outlook: nzira nhatu dzakanakisa kumutengi wemeyili
Ivan cantu akadaro
Thunderbird ndiyo sarudzo yakanakisa, ndine makore maviri akazara linux, uye ndiyo chaiyo yandinokurudzira zvakanyanya.
Pindura kuna Ivan cantu
Zvaive zvakakodzera kuwedzera vivaldi nemaneja wayo wetsamba, iyo kunyangwe iri muchikamu chebeta iri kuita zvakanaka
Zvakanaka, ini ndakaisa iyo outlook.com email account mune sylpheed mutengi uye inoshanda zvakakwana